A Billowga ah ee Tusaha Isticmaalka canabka
VINE waa adeeg online gaaban qaab-oo ogolaanaysaa record users iyo edit shan ilaa lix-labaad-dheer Nagatimo clips video iyo revine, ama dadka ha la wadaagin posts la raacaynay. In this article, waxaan ku tusi doonaa talaabooyin hore qaar ka mid ah in la xasuusto in si uu u shaqeeyo canabka ugu wax ku ool ah xataa haddii aad hadda uun soo bixi codsiga.
Natiijooyinka Lagu Doonayo
Ka dib markii reading this article, waxaana rajeynayaa, waxaad yeelan doontaa in ay u fahmaan codsiga si cad si aad u isticmaali kartaa hanuun dheeraad ah mustaqbalka aan. Taas laga soo tago, waxaan sidoo kale rajeynayaa in ay caawin karaan in aad dadka kale la isku xiro ee adduunka oo dhan ku ool ah iyada oo aad videos. Halkan waxaa ku qoran faahfaahin ku saabsan sida loo isticmaali canabka ah, iyo boostada aad set aad u gaarka ah videos ee geedi socodka iyo weliba.
Part One: Abuuridda xisaab iyo Saxiixiisa In
Qaybta Labaad: Xiriirka lala Friends
Qaybta Saddexaad: Sida loo Helo Great Videos on canabka
Qaybta Afraad: Sida loo sameeyo Videos geedcanabka App ah
Qaybta Shan: dhib Top 5 canabka dhibaatooyinka
Qaybta Lix: Saddexaad ee Xisbiga canabka Apps
Talaabada Koowaad: First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo codsiga ka dukaanka. Ha ka walwalin sababtoo ah codsiga gebi ahaanba waa mid lacag la'aan ah. Waxaad haysan doontaa in aad ku qaataan dime si aad u hesho codsiga naftaada dhaqsiyaha badan uu.
Tallaabada Labaad: Tallaabada xigta waa in la abuuro xisaab. Marka aad si guul leh u soo bixi codsiga, aad haatan waxay furan karaan canabka ah, iyo guji calaamada in button Twitter leh. Button Tani waa midab buluug ah. Taas laga soo tago, waxa kale oo aad isku diiwaan gelin kartaa oo aad email adigoo gujinaya calaamada in hadda button.
Tallaabada Saddexaad: Taas ka dib, waxay noqon lahayd inaad sugee aad calaamad in aqoonsiga adigoo gujinaya ogolaan. Markaas waxaad ku dari kartaa sawiro oo riixaya icon buufinka ee ku. Taas ka dib, guji soo socda. Haddii aad doorato inay la soo wareegto in aad email, kaliya aad u leedahay in aad raacdo Dardar si ay si guul leh sidaa sameeyaan.
Waxa soo socda in aad sameyn karto oo ku saabsan waa in ay baadhaan codsiga laftiisa. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tallaabooyinka ay tahay in la raaco si ay u sahamiyaan canabka ku ool ah.
Talaabada Koowaad: Waxaad bilaabi kartaa in aad ugu wanaagsan samaynaya si aad u ogaato dadka kale ee canabka aad ku xidhan karto. Waxaad ka heli kartaa dad cusub ama aan ka helo dadka aad hore u tiqiin. Waxaad tegi kartaa adiga kuu gaar ah profile adigoo gujinaya bidix guriga geeska icon sare. Ka dib marka aad samaysay, hoos u soo dejiyey menu muuqan doonaa. Oo halkaasaannu ka, waxaad dooran kartaa in aad profile.
Tallaabada Labaad: Markay aad profile, waxaad riixi kartaa icon u eg laba qof oo ku taalla geeska kore ee midigta ee shaashadda. Taas ka dib, waxaad yeelan doontaa fursad u heli saaxiibadaa iyada oo buugga cinwaanka ama liiska Twitter.
Tallaabada Saddexaad: Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad hesho saaxiibo gacanta adigoo gujinaya weyneyso ah. Intaa ka dib, ayaad ku laaban kartaa in aad page guriga iyo hoos si aad u aragto qaar ka mid ah videos in saaxiibadaa ayaa uploaded. Xusuusnow in aad ka ciyaari kara videos kaliya ka dib marka aad socod u badan.
Talaabada 1: Haddii aad rabto inaad aragto kale videos, aad ku sawirnaa icon ee geeska bidix ee sare oo guji baadhaan. Ka dibna waxaad awoodi doontaa inaad doorato by category iyo gees u arkaan kale videos ka adiga kuu gaar ah.
Talaabada 2: Haddii aad jeclaan lahayd inaad aragto caanka ah ama trending videos, guji caan ah oo hadda muddo. Taas laga soo tago, waxaad sidoo kale riixi kartaa wax mowduucyo shaashadda sahamin si ay u awoodaan si ay u arkaan videos via beertaas.
Kuwaasi waxay yihiin qaar ka mid ah abaalmarinno in aad ka heli doonto ka abuuraya xisaab canabka. Haddii aad rabto in badan oo ku saabsan arrintan bartaan, fadlan ha ka labalabeyn sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo in aad soo booqato website-. Ma xaqiiqo ah in aad markii hore ka qoomameeyey doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilaabi sahaminta.
Hadda oo aad ku leedahay xisaabta iyo aad ogtahay sida loo helo saaxiibadaa, aad sii wado si aad u gaarka ah videos oo geliyaan. Waa kuwan sida.
Talaabada Koowaad: First of dhan, waxaad tagi kartaa screen Home ah. Taas waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya image ka ​​heshay geeska bidix ee sare ee shaashadda. Next, waxaad riixi kartaa a camera video icon, mar this on dhinaca kore ee midig ee shaashada. Taas ka dib, aad screen noqon doonaa camera video ah oo aad u yeelan doontaa in la tilmaamo iyo toogan wax xiiso u leh in aad rabto in aad doonto in ay qabsadaan.
Tallaabada Labaad: Yeelo fartaada ku cadaadi daaha dhowr ilbiriqsi. Taas ka dib, hadda uun aad ka saari karto fartaada ka qalab aad iyo samayn wax isku mida mar labaad. Waxa aad ku celin kartaa tallaabadan jeer inta ugu badan ee aad jeclaan lahayd ilaa wakhtiga yahay. Had iyo jeer xasuuso in codsiga Qori kaliya aad videos markii fartaada waa shaashadda laftiisa. Video kasta oo socon doona ilaa 6 ilbiriqsi dheer.
Talaabada Sadexaad: dib markii la abuurayo video ah, aad haatan raaci karo oo ku saabsan waxa ay dad kale la wadaago. Sida la YouTube, waxaad ku qori kartaa sharaxaad ku qor sanduuqa hoose. Waxa kale oo aad awood u yeelan doonaan in lagu daro meesha aad joogto si ay video ka tags. Taas laga soo tago, waxa kale oo aad ku dari kartaa in aad channel u gaar ah. Tan waxaa ku jira qaybaha sida comedy, xoolaha, madadaalo, cayaaraha, iwm
Talaabada Afraad: doontaa sidoo kale lagu siin fursad u boostada aad videos on canabka ah, iyo website-yada kale ee warbaahinta bulshada sida Twitter ama Facebook. Waxaad ku samayn kartaa xulashada madal in aad shaqsi ahaan jecel aad video in la posted on.
Taas ka dib, guji samaysay iyo videos si toos ah uploaded in wax kasta oo madal warbaahinta bulshada aad dooratay.
Sida oo farxad u nahay in canabka ugu danbeyn waa ku Android, si aan u horeysay qirtay in weli ay jiraan a laalaab yar in ay ka shaqeeyaan. Qaybtani waxay kaa caawin doonaan inaad fahamto shan dhibaatooyinka ugu sareeya in aad la kulmi karaan oo ay suurtogal u xaliyo sida ugu dhaqsaha badan.
Dhibaatada ugu horreeya ee aad la kulmi kartaa geedcanabka waa cadadka yar oo meel khasnado heli karo. Taas macnaheedu waxa weeye in ay jiraan kaliya sacab muggiis oo videos canabka in aad awood u yeelan doonaan in ay badbaadin jidka keliya device.The si ay u xaliyaan dhibaatadan waayo, haatan waa in khasnado joogto ah oo nadiif ah in ay nadiifiso memory.And loo isticmaalo lacag la'aan ah ilaa meel ka mid ah.
Dhibaatada kale oo aad la kulmi kartaa waa in ay si lama filaan ah oo aan wax badan ka xasuusan ku filan oo ku saabsan Android device.To this xaliyo, waxaad tagi kartaa goobaha aad iyo aad u hubiso in ay hubiyaan status.As xusuusta aad ugu dhakhsaha badan ee aad u aragto in ay tahay ku dhawaad ​​buuxa, ka dibna ay waqti sare si aad u cadeeyo aad khasnado.
Waxa intaa dheer in, dhibaato kale oo aad la kulmi kartaa marka ay timaado la isticmaalayo canabka waa waxa ugu adag ee suuragalka ah in saxafiyiinta links.Heres video sida loo xaliyo:
Waxaad lahaydeen in la hubiyo in canabka aan hyperlinked.If URL ayaa lagu muujiyay in aad midabka link u gaar ah, markaas waa cinwaanka hyperlinked.To badan tahay tan, waa in aad si fudud u dooro link oo dhan ka dibna riix unlink hoos toolbar tafatiraha muuqaal ah. Marka waa unlinked, waxaa ka dhex muuqan doonaa madow.
Hubi in la abuuro URL sida line.This hal waa in ay jirto in jirin whitespace ama jilayaasha kale ee u dhaxeeya URL laftiisa.
Si looga hortago sidoo jabsiga, aad qabto si loo hubiyo in ammaanka iyo goobaha gaarka ah u telefoonka waxaa on.Do ha ka siiyo sirta aad si fudud iyo in la hubiyo in aad haysato telefoonka ah meesha ugu ammaansan.
Ugu dambayn, waxaa idinku waajib ah in aad hubiso in aad updated la horumarkii ugu dambeeyay in codsiga waa provide.If aad u baahan tahay si aad u cusboonaysiiso codsigaaga, waa in aad sidaas u samayn aan delay.Failing u samayno u abaalmarin doonaa qalab aad waxtar lahayn.
Haddii weli aad dhibaato ku saabsan sida loo isticmaalo canabka, waxaa jira codsiyada kale hubaal ah in uu noqon karaa mid sahlan in ay isticmaalaan oo kaa caawin karaan in aad xaliso dhibaatooyinkaaga oo dhan marka la isticmaalayo canabka.
1. canabka Flow
Tani waa codsi ah oo lacag la'aan ah in aad isticmaali karto si aad u aragto qaar ka mid ah canabka videos on telefoonka. Waxaad kaloo isticmaali kartaa app this si ay baaritaan ugu jecel videos xitaa haddii aadan haysan kombiyuutar. Fadlan la soco in codsigan si gaar ah ma geliyaan videos iyo aragtida videos oo kaliya in ay yihiin barta.
Codsigan gaar ah ayaa loo heli karaa dadka isticmaala blackberry. Iyadoo codsigan in gacmahaaga, waxaad ma noqon doonto oo keliya si aad u daawato videos awoodo, sidoo kale jiri doona in aad awood u geliyaan, record oo ka xoq abuuraan geedo canab ah fudayd.
Tani waa codsi canabka ah ee telefoonka ee Windows. Iyada codsigan gaar ah, waxaad sidoo kale gali kartaa, la abuuro iyo edit canabkaaga aan aad u gaarka ah videos si fudud oo ugu dhaqsiyaha badan. Waxaa kale oo lacag la'aan ah si ay u soo bixi sida kuwii kale oo dhan.
Xusuusin dheeraad ah
Waxa ugu muhiimsan in la xusuusto waa in ay feejignaadaan marka ay timaado adiga oo isticmaaleya isticmaale canabka account ama wax kasta oo kale oo xisaab warbaahinta bulshada. Waxaad ma noqon karaa mid aad u hubiso marka ay timaado amaanka iyo nabadgelyada, gaar ahaan internetka. Taasi waa sababta aad u leeyihiin in ay aad u taxaddar. Haddii kale, waxaad la kulmi doonaa samaynta sawirrada ah oo dhan gaarka ah laga heli karaa bogga internetka.
Intaa waxaa dheer, in la hubiyo in sirta ah oo dhan ay si ammaan ah iska kaydiyaa meel gaarka ah si aan si fudud la raadsan doona kuwa kale oo aan la garanaynin in aad. Sidaas, waxaad dareemi doontaa yar ka walwalsan isticmaalaya xisaab aad canabka si joogto ah.
Sida loo Edit canabka Videos
Top 5 canabka Raadka Gaarka ah iyo sida loo dar canabka Video
Video Player ee Common Arrimaha
Daawo Hot Hindi Movies Online for Free
4k Video Downloader Alternative: Download Online Video Si fudud
Top 5 Free Online AVI in 3GP Converter
Sida loo dar Photo si Video
Sida loo Download Qosol ama dhinta Video fudayd
Sida loo Beddelaan AVI in TV Apple
> Resource > Video > A Billowga ah ee Tusaha Isticmaalka canabka